Faha-50 taonan’ny FJKM : Nisokatra ny fankalazana -
AccueilSongandinaFaha-50 taonan’ny FJKM : Nisokatra ny fankalazana
Faha-50 taonan’ny FJKM : Nisokatra ny fankalazana
18/08/2018 admintriatra Songandina 0
Tontosa omaly maraina tao amin’ny Fjkm Tranovato Anjoma ny fanompoam-pivavahana nanokafana ny ivon’ ny fankalazana ny faha-50 taonan’ ny Fjkm, sy ny faha-200 taona nidiran’ny LMS (London Missionary Society) teto Madagasikara. Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny fitsidihana ireo trano heva mampiseho ny tantaran’ny FJKM. Tazana teny an-toerana ihany koa ny fanotronan’ny fianakavian’ireo misionera, izay mbola velona ankehitriny. Ny tolakandro dia nitohy teny Antetezampasika ny asa fitoriana, izay toerana nitobian’ireo misionera David Jones. Raha ny antontan’isan’ireo mpino tonga any amin’ ny renivohitra ekonomikan’i Madagasikara manotrona ny fankalazana, dia mahatratra hatrany amin’ ny 50 000. Ho an’ny rahampitso kosa ny fanokanana ny sekoly Fjkm David Jones Anjoma any Toamasina, izay tsangambaton’ny jobily roa sosona. Haharitra telo andro ny ivon’ny fankalazana, ary farany amin’ ny fotoam-bavaka lehibe ny fotoana. Teny fanevan’ny fanakalazana ny voalazan’ny soratra masina hita ao amin’ ny II timoty 1: and 8a “aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika”. Lohahevitry ny toriteny nandritra ny fanompoam-pivavahana fanombohana ny ivon’ny fankalazana ny Romane 12,21, izay mitarika ny mpino hiorina amin’ny soratra masina, sy ny fiorenan’ny finoana an’i Jesoa Kristy.
Tsara ny mampatsiahy fa niorina araka ny fanambaran’ny synoda lehibe voalohany tao Toamasina ny 18 aogositra 1968 ny FJKM. Fehezin’ny hitsivolana laharana faha- 62-117 tamin’ny 01 obrobra 1962. Nankatoavin’ny didy fanapahana laharana faha-2175 tamin’ny 06 jolay 1972, izay navoaka tamin’ny gazetim-panjakan’ny Repoblika Malagasy (JORM) tamin’ny 15 Jolay 1972. Ny zava-kendren’ny FJKM dia ny handrenesan’ny Malagasy sy ny mponina eto Madagasikara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy, sy handraisany ary hanekeny azy ho Tompo sy Mpamonjy. Isan’ny zava-kendren’ny FJKM ihany koa ny fijoroany ho vavolombelon’i Jesoa Kristy eo amin’ny fiarahamonina, anehoany ny maha fanasina sy maha fanazavana azy eo amin’ny voahary manontolo sy izao tontolo izao. Raha ny adidy miandry ny FJKM indray dia eo ny fanambarana fa Jesoa Kristy no Tompo tokana mpamonjy izao tontolo izao ; Ny manompo sy midera ary manome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny teny sy amin’ny asa ary ny fiainana rehetra ; ary koa ny fitoriana ny filazantsaran’i Jesoa Kristy Tompo amin’ny olona rehetra sy ny olona manontolo.
Nahitsy sady hentitra ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, omaly, teny amin’ny Epp Antanimbarinandriana nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin’ny fitokanana ny tranom-boky sy ny foibe fanovozana teknolojia manoloana ireo mpanaratsy faly ny hanakiana fotsiny nefa tsy hanao zavatra. ...Tohiny